SAT-IF CATV mpanamboatra sy mpamatsy | China SAT-IF CATV Transmission Factory
CATV sy mpandray optika satelita
Endri-javatra 1. miaraka amin'ny detector optika avo lenta. 2.It dia fisehoan'ny haitao avo lenta amin'ny CATV sy ny tarika L-band mampifandray ireo vokatra 3.Ity dia azo raisina amin'ny fibre optique misy zanabolana 47 ～ 2600MHz sy CATV niomerika sy famantarana analogy. Fametrahana 4.Simple; Mety ho an'ny mpampiasa ny mametraka azy. 5.Fampidirana herinaratra avy amin'ny + 0 ～ -13dBm. 6.Izany dia manana fahaizan'ny fanoherana elektromagnetika tsara. 7.Fampisehoana avo fa ambany ny vidiny. Ny mason-tsivitry ny paratera dia miasa ...
Famaritana ZST andian-tsarimihetsika zanabolana mini satellite transmitter dia azo zaraina ho ZST1310M (1310nm) sy ZST1550M (1550nm) arakaraka ny halavan'ny halavan'ny halavany, ny herin'ny optique output dia 0-10dBm tsy voatery. Endri-javatra 1. Natao ho an'ny tambajotra FTTH. 2.Ny fahamendrehana avo lenta, mety amin'ny fampiharana CATV & SAT-IF. 3.Ny fahamendrehana tsara sy ny fisaka. 4.Fandraisana an-tariby solo-mode avo lenta 5.Mampiasà fitaovana mavitrika fanamafisam-peo GaAs. 6. Teknolojia ambany feo ambany. 7.Havitsy kely kokoa ary fametrahana mora kokoa. 8.RED-LED f ...
Transmitter an'ny CATV & Satellite Optical (ZST9526)
Famaritana ny vokatra ZST9526 Satellite Optical Transmitter dia mandray laser laser DFB lolo marindrano avo lenta izay namboarina mivantana handefasana famantarana 47-862MHz sy 950 ~ 2600MHz amin'ny fibre tokana. Afaka misafidy ny halavan'ny halavan'ny ITU ho an'ny rafitra DWDM hanitatra sy hanavao ireo tamba-jotra. Izy io dia afaka manitatra amin'ny EDFA sy EYDFA ho an'ny rafitra FTTH goavambe. Mety hifanaraka amin'ny haitao FTTx PON rehetra hahatsapany ny fitambaran'ny CATV, DVB-S, Internet ary FTTH. ZST9526 Satellite Optical Transmitter a ...
Endri-javatra 1. miaraka amin'ny detector optika avo lenta. 2.It dia fisehoan'ny haitao avo lenta amin'ny CATV sy ny tarika L-band mampifandray ireo vokatra 3.Ity dia azo raisina amin'ny fibre optika miaraka amina satelita 47 ~ 2600MHz sy famantarana nomerika sy analog an'ny CATV. Fametrahana 4.Simple; Mety ho an'ny mpampiasa ny mametraka azy. 5.Fampidirana herinaratra avy amin'ny + 0 ~ -13dBm. 6.Izany dia manana fahaizan'ny fanoherana elektromagnetika tsara. 7.Fampisehoana avo fa ambany ny vidiny. Diagram Parameter Optical Working Wa ...
Mpandray zanabolana zirika ZSR2600M
Endri-javatra (1) Manangana detector optika fahatsapana avo lenta ho singa fototra, -8dBm mahazo fahatsapana (2) casing aluminium vita amin'ny rindrina. (3) Mifanaraka amin'ny FTTx PON Tech (4) Fanaparitahana hafanana tsara (5) Ho an'ny tamba-jotra HFC misy mpampiasa marobe (6) Mifanaraka amin'ny FTTx PON Tech Teknika Paramètaly Item Index Remark Min Typ Max Optical Characteristics Operating Wavelength nm 1200 1600 Responsivity A / W ≥0.9 Mahazo herinaratra optika dB ...
ZSR2600MD L tarika zanabolana mpandray mpiorina fananganana-in WDM
Famintinana ny vokatra ZSR2600MD L tarika satellite optika mpandray dia ny vokatra nasongadinay manokana ho an'ny FTTH / WDM Fiber amin'ny rafitry ny tambajotra Home. Miaraka amin'ny akorandriaka kely, rafitra boribory anatiny sy mirindra ary mari-pamantarana tena tsara. Io no safidy voalohany ho an'ny faritra onenana sy tambajotra fibre optika ao an-trano. CWDM namboarina, ny halavan'ny RFTV dia 1550nm. Mandehana ny halavan'ny halavan'ny 1310 / 1490nm. Afaka mifandray amin'i EPON, GPON ary ONU. Mampiavaka ny fampisehoana ■ Ho an'ny ...